Home News Askari Canadian ah oo loo heeysto dil muwaadin Soomaaliyeed!!
Dacwad loo heesto sargaal katirsan booliiska dalka Canada ayaa isniintii ka bilaabatay dalkaasi, waxaana sargaalkaasi ku eedeesan yahay dilka Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cabdi.
Booliiska Canada dilay Cabdiraxmaan Cabdi oo la sheegay in madaxa looga jiray, ninkan ayaana lagu dilay meel ku dhaw gurigiisa kadib markii booliiska lagu war galiyay in goob maqaayad ah ka sameeyay qash qashaad.
Muuqaal ay duubtay Caamirada qarsoon ee CTV ayaa laga arkay booliiska magaalada Ottawa oo awood xad dhaaf ah u adeegsanaya muwaadinka Soomaaliyeed, waxaana dilkan ay geesteen booliiska uu dhacay sanadkii 2016-kii.
Baarayaasha kiiskan ayaa isniintii dacwad kusoo oogay sargaal katirsanaa booliiska Canada oo loo heesto in dilka Muwaadinka Soomaaliyeed masuul ka ahaa, waxaana sargaalka kiiskan loo heesto oo maxkamad lasoo taagay beeniyay dambiga loo heesto.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee kunool dalka Canada ayaa dadaal badan ku bixiyay sidii cadaalad u heli lahaa muwaadinka Soomaaliyeed ee loo dilay sida gardada ah, waxa ayna Soomaalida Canada sheegeen in ay sii wadayaan cadaalad u helida marxuunka la dilay.